ကျောင်းမှာ၌ငါ့ကလေးကမှတ်တမ်းတင် | USAHello | USAHello
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျောင်းတစ်ကျောင်းအတွက်သင့်ကလေးစတင်ရန်သင်ပထမဦးဆုံးကျောင်းသားတစ်ဦးအဖြစ်သင့်ကလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ရမည်ဖြစ်သည်. သင်ကျောင်းမှသင့်ကလေးကိုလက်ခံနိုင်အောင်ကျောင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စာတမ်းများလက်မှတ်ရေးထိုးရန်လိုအပ်သောဤနည်းလမ်းများ. သင်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပတ်သက်. နှင့်မည်သို့ကျောင်းမှာသင့်ကလေးကိုမှတ်ပုံတင်ရန်ထွက်ရှာမည်. နေရာချထားနှင့်အထူးစာသင်ခန်းအကြောင်းကို Read. သင့်ကလေးလိုဖတ်ပါ, ဘာလုပ်သင့်ကလေးကိုပျက်ကွက်လျှင်မည်သို့ကျောင်းကိုရဖို့.
ကျောင်းခရိုင်အတွင်းရှိနေထိုင်၏အထောက်အထား. ဒါဟာသင်သင်၏အိမ်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်းတွင်နေထိုင်လျက်ရှိသောပြသနိုင်ဖို့ရှိသည်, ဆိုလိုတယ်. နေထိုင်ရာသက်သေများ၏ဥပမာတစ်ခုတိုက်ခန်းငှားရမ်း site ကို, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးဘဏ်အကောင့်, ဒါမှမဟုတ်ငွေတောင်းခံလွှာခေါင်းစဉ်အဆောက်အဦဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာသင်ကျောင်းကကလေးတွေမှတ်တမ်းတင်ထားသည်ရှိရာရပ်ကွက်အတွက်စွန့်ခွာကြောင်းကိုပြသရန်ဖြစ်ပါသည်.
အသက်အထောက်အထား. သင့်ကလေး၏မွေးနေ့အားလပ်ရက်နှင့်အတူဥပမာ, မွေးဖွားလက်မှတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်.
သငျသညျကြောငျးတှငျသင့်ကလေးကိုကျောင်းအပ်သည့်အခါတစ်ခုချင်းစီကိုကျောင်းခရိုင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံရှိစေခြင်းငှါ. ကျောင်း site ကိုဧရိယာပေါ်တွင်ပုံစံကိုရှာဖွေ. သင်တို့သည်လည်းကျောင်းသွားနှင့်ကျောင်းအတွင်းရေးမှူးအားဟောပြောဖို့တောင်းနိုင်ပါတယ်.
အများစုမှာကျောင်းများသြဂုတ်လသို့မဟုတ်စက်တင်ဘာလအတွက်နွေရာသီသို့မဟုတ်အစောပိုင်းပြိုလဲခြင်းအဆုံးမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌စတင်. သငျသညျနွေရာသီအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရာသို့လာလျှင်, သင်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာတွေ့မှဇူလိုင်သို့မဟုတ်သြဂုတ်လအတွင်းကသင့်ကလေး၏ကျောင်းကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်. သင်ကျောင်းတွင်တစ်နှစ်ကာလအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလာလျှင်, သင်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင့်ကလေးမှတ်ပုံတင်ရန်ရမယ်.
လိုအပ်သောအသက်အရွယ်ကြားရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကျောင်းသားများအတွက်ကျောင်းအပ်6နှင့် 16 ခုနှစ်. အချို့သောပြည်နယ်များမှာတော့ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်နှစ်ဖြစ်နိုင်သည်. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် ခေတ်ကာလ၏အသိပညာနှင့်သင့်ပြည်နယ်အတွင်းရှိနှစ်ပေါင်းများ၏အရေအတွက်.
ပုံမှန်တက်ရောက်သူသင့်ရဲ့ကျောင်းသားများအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်. School တွင်တက်ရောက်ခြေရာကောက်. သင့်ရဲ့ကျောင်းသားများအတွက်ကျောင်းကရက်ပေါင်းအများကြီးဆုံးရှုံးလျှင်ပညတ်တရားကိုသင်တို့အားတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရနိုင်. ကျောင်းသားရက်ပေါင်းအများကြီးဆုံးရှုံးဖို့စတင်ခဲ့လျှင်သင်သည်များစွာသောသတိပေးချက်များရလိမ့်မယ်. ကွဲပြားခြားနားသောပညာရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများများ၏အရေအတွက်အတိအကျကို.
သငျသညျကျောင်းကောင်တာကနေပျောက်ဆုံးကြသောအခါမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်. အများစုမှာကျောင်းများပျက်ကွက်နှစ်မျိုးရှိတယ်. မရှိခြင်း Algiapan ငြိုငြင်နှင့်ဆင်ခြေမပါဘဲနှစ်မျိုး.
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများ၏မရှိခြင်းထောက်ခံနေကြတယ် (ဥပမာအားဖြင့်, ဘတ်စ်ကားမပြခဲ့ဘူးပါလျှင်)
ကြိုးခုန် (မသွားမနေပါနဲ့) အတန်း
ကြောငျးအတှကျနှောင်းပိုင်းတွင်ဆိုက်ရောက်. နှောင့်နှေးလည်းဖင်ဟုခေါ်သည်. နှောင့်နှေးခှငျ့နဲ့ကိုယ်အပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ပါ. နှောင့်နှေးဆင်ခြေဆင်လက်ပျက်ကွက်၏တူညီသောစာရင်းရှိပါတယ် Excuse.
ကျောင်းသားများကအမြဲတမ်းအားဖြင့်လွဲချော်အားလုံးအလုပ်ပေးအပ်သောတာဝန်ကိုထမ်း. သင်သို့မဟုတ်မိဘတစ်ဦးသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူ, မရှိခြင်းများအတွက်ကျောင်းအကြောင်းပြချက်ပြောပြဘို့တာဝန်ရှိသည်. ရုံးသို့မဟုတ်တက်ရောက်သူရုံးဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ, စာရိုက်ခြင်းဖြင့်ကျောင်းပြောပြပါနှင့်ဆရာသို့မဟုတ်အတွင်းရေးမှူးသို့မဟုတ်မန်နေဂျာတစ်ဦးစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုး. သင်သည်သင်၏ကလေးသည်အစောပိုင်းကျောင်းကလက်လွတ်မည်ကိုသိလျှင်, ကကျောင်းပြောပြရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်. တစ်ခါတစ်ရံမမျှော်လင့်၏မရှိခြင်း. ဒါဟာအတော်လေးမဟုတ်ပါဘူး. နံနက်ယံ၌ကျောင်းသို့မဟုတ်နောက်နေ့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
ကျောင်းသားများပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့နှင့်အတူကျောင်းသို့, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, ဒါမှမဟုတ် tools တွေကိုတက်ဆောင်ခဲ့ရမည်. သင့်ရဲ့ website မှာ site ၏စာရင်းကိုအပေါ်တစ်ဦးသပိတ်မှောက်သို့မဟုတ် Web ကိုကျောင်းသို့မဟုတ်စာသင်ခန်းဆရာဖွစျလိမျ့မညျ. ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော menu ကိုဖွစျစနေို.
အများအားဖြင့်လိုအပ်သည့်စက္ကူမှတ်စုများ, ခဲတံသို့မဟုတ်ခြံစာအုပ်. ထို့အပြင်အသုံးဝင်သောစာတမ်းများကိုကယ်တင်ဖို့သုံးကွင်းသို့မဟုတ်ဖိုလ်ဒါ၏စာအုပ်ချုပ်သမားအစိတ်အပိုင်း.
သငျသညျစျေးကြီးကျောင်းကထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများရနိုင်. အရိုးရှင်းဆုံးစက္ကူ, ခဲတံနှင့်ခြံအလုပ်. သင်ပိုမိုလူကြိုက်များသို့မဟုတ်ဇိမ်ခံဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ပါဘူး. တစ်ခါတစ်ရံဆရာ, ဆရာမသို့မဟုတ်ကျောင်းများအပိုဆောင်းရိက္ခာရှိပြီးသင်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်. ကျောင်းများသို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်ဘာသာရေးတခါတရံပေးထားသောကျောင်းကထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ. ကျောင်းကထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများရှာရန်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကျောင်းမစတင်မှီကူညီပေးသည်. အဆိုပါလက်ဆောင်များအများစုမှာကျောင်းတစ်နှစ်ရဲ့အစမပြုမီချက်ချင်းဖွစျလိမျ့မညျ.
အများစုမှာကျောင်းကခရိုင်ကျောင်းရဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေး. သငျသညျကျောင်းအနီးအသက်ရှင်လျှင်, ကျောင်းသင်တစ်ဦးဆိုင်ကယ်လမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်စီးနိုင်သည်ကိုမျှော်လင့်. ဒါဟာဘတ်စ်ကားနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေါ်တွင်သင်၏ website ကိုပြည်နယ်ပညာရေးသတင်းအချက်အလက်ပါလိမ့်မည်. ဘတ်စ်ကားဘူတာမှာပါလိမ့်မည်သည့်အခါဒါဟာရှိရာဘတ်စ်ကားသင်ပြောပြပြီးအချိန်စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်. ကျောင်းကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အလက်များအကြောင်း Biskrter ကိုဆက်သွယ်ပါ.
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ပညာရေးဆိုင်ရာဒေသများကျောင်းသားတစ်ဦး၏အခွင့်ထူး, မကျောင်းသားတစ်ဦးလက်ျာဘက်စဉ်းစားသည်. ကျောင်းသားများစနစ်တကျပြုမူကြဘူးလျှင် franchise မပယ်ရှားနိုင်ပါတယ်. School တွင်ဘတ်စ်ကားစီးနင်းကျောင်းအတူတူအပြုအမူလိုအပ်ပါတယ်.
ကာကွယ်ဆေးထိုးများသောအားဖြင့်ကျောင်းသွားဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကလေးများအပေါ်ကာကွယ်ဆေးလိုအပ်သည်. ဤရွေ့ကားလိုအပ်ချက်များကိုကျောင်းခရိုင်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနား. သူတို့ကတခါတရံပြည်နယ်ဥပဒေများဖြင့်အုပ်ချုပ်ကြသည်. သင့်ကလေးအပေါငျးတို့သကာကွယ်ဆေးလိုအပ်ရရန်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်ရှိခြင်းမဟုတ်သည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုစွန့်လွှတ်လိုအပ်ပါတယ်. ကာကွယ်ဆေးထိုးမှတ်တမ်းများများသောအားဖြင့်ကျောင်းသားတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်လေ့လာမှုရဲ့ start မှာဖြစ်ကြောင်း.
ပြည်သူပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်စာသင်ကျောင်းအစားအစာများကျောင်းတိုင်းနေ့ရက်ကာလ၌သားသမီးတို့အဘို့အခမဲ့နေ့လည်စာသို့မဟုတ်အခမဲ့ပူဇော်. ဒါဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကျောင်းနေ့လည်စာအစီအစဉ်ကိုခေါ်ဖက်ဒရယ်အစိုးရကငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါဟာသင်ကျောင်းသားတစ်ဦးအခမဲ့နေ့လည်စာသို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းနေ့လယ်စာများအတွက်ငျြးပွညျ့မီသို့မဟုတ်မရှိမရှိမိသားစု get ငွေဘယ်လောက်ဆုံးဖြတ်သည်. တချို့ကကျောင်းကခရိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကျောင်းနေ့လည်စာအစီအစဉ်အိမ်မှာသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့. ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်ကျောင်းအတွင်းရေးမှူးကိုမေး.
တချို့ကကျောင်းများတွင်ဤအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နံနက်စာပူဇော်. တချို့ကကျောင်းများတွင်တစ်ဦးတနင်္ဂနွေသို့မဟုတ်ကျောင်းအားလပ်ရက်သို့မဟုတ်နွေရာသီအားလပ်ရက်မိသားစုများဖြုန်းဖို့ဝင်ငွေနည်းအတွက်ကျောင်းသားတွေကိုသူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့. School တွင်အတွင်းရေးမှူးအခမဲ့နေ့လည်စာနှင့်လျှော့စျေးနှင့် ပတ်သက်. သင်နှင့်အတူစကားပြောနိုင်သည်. သို့မဟုတျ, ကျောင်းအတွင်းရေးမှူးသင်ကူညီနိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်.